Caymiska: Top 5 Webka iyo Adeegyada Kaydinta Muuqaalka Internetka
Shabaqa , soo saar, iyo falanqaynta xogta. Waxay si sahlan u soo saaraan macluumaad faa'iido leh oo ka socda goobo kala duwan, gaar ahaan xogta waqtiga dhabta ah. Haddii aadan ogeyn sida loo soo saaro macluumaadka bogagga internetka ee kala duwan, waxaanu kugula talineynaa adiga oo isticmaalaya adeegyadan soo socda ee quruxda badan iyo adeegga waxtarka leh. Qaarkood waa kuwo bilaash ah, halka kuwa kalena ay kuugu kici doonaan wax ka yar $ 20 illaa $ 100 bishii iyadoo ku xiran shuruudahaaga.
1. Webhose - parchi giochi roma bambini. io
Webhose. Io wuxuu siiyaa fursad deg deg ah oo ku saabsan ujeedada websaydhka. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka soo qaadato xogta laga soo xigtay posts blog, faallooyinka, fariimo email, iyo bogagga wararka. Waxaad si sahlan u ururin kartaa loona ilaalin karaa mowduucyada ugu habboon ee mowduucyada internetka isticmaalaya Webhose. io. Tani ma aha warshad caadi ah oo 19 ah websaydh ah , laakiin waa sahlan weyn waxayna bixisaa waxyaabaha ku jira JSON, RSS, Excel iyo XML foomamka. Intaa waxaa dheer, Webhose. Waxaan u ogolaaneynaa inaan si dhaqso ah uga warbixino xogta, waxaanna eegnaa suuqyada isbedelka si aad u hesho natiijooyinka ugu xiisaha badan.
Dexi io waa adeeg kale oo shabakad ah oo kayd ah iyo qalab macdan ah. Waxaa si gaar ah loogu talagalay in laga soo saaro macluumaadka bogagga kala duwan ee bogagga waxayna kaa caawineysaa inaad kaydiso wax soo saarka daruuraha. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa macluumaadka JSON, HTML, ATOM, XML iyo RSS, foomka kor u qaadida ganacsigaaga iyo inaad hesho natiijooyinka la rabay ee ku saabsan arrimo ah daqiiqado. Qeybta ugu wanaagsani waxay tahay in qalabkani uu ku siin doono sifooyinka qashinka ah sida sockets proxy, taageerada caddaynta joogtada ah, iyo Captcha solver.
ParseHub waa shabakad faa'iido leh oo faa'iido leh oo wax ku ool ah qalabka macdanta ee internetka. Waxaa loogu talagalay in laga soo saaro macluumaadka meelo badan oo leh Excel, CSV, JSON iyo ParseHub API. Intaa waxaa dheer, tan oo kale waxaad ubaahantahay inaadan haysan xirfadaha barnaamijka qaarkood. Waxay bixisaa sifooyin kala duwan sida raadinta tartamayaasha 'content. ParseHub waxay bixisaa fursado falanqaynta suuqyada kala duwan si ay kaaga caawiyaan inaad bartilmaameed u noqoto macaamiisha iman kara aduunka oo dhan. Tani waa codsi ku salaysan dariiqa ku saleysan dhamaan baahidaada saarida xogtaada.
80legs ayaa weli ah soo saarista xogta daruuriga ah iyo barnaamijka shabakada webka. Waxay bixisaa xog-is-waydaarsi heer sare ah waxayna ku dareysaa awoodda in ka badan konton kun oo kumbuyuutar ah oo la geeyo adduunka oo dhan. Ma aha oo keliya xuruufta xogta, laakiin sidoo kale waxay ku socotaa boggaga internetka ee kala duwan. Waxaad u baahan tahay kaliya inaad sameysid server-ka oo u oggolaato 80legs inuu shaqadiisa sameeyo. Qiimeeynta adeeggan macdanta qodobkan waxay ku saleysan tahay baahida macaamiisha, taas oo ka dhigeysa qalab wax ku ool ah oo lagu bilaabi karo.
5. Soo dejinta. io
Soo dejinta. Io waa mid ka mid ah qodobada ugu fiican ee ugu macquulsan macdanta iyo qalabka wax lagu qoro . Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka soo qaadato macluumaadka meelo kala duwan oo bixiya adeegyo kala duwan ee xogta la soo saaro sida dhalashada hoggaaminta, kormeerka qiimaha, horumarinta appka, cilmi baarista suuqa, cilmiga mashiinka iyo cilmi baarista. Uma baahnid inaad haysan wax xirfad barnaamij ah si aad u isticmaasho qalabkan. Dhab ahaantii, waxay la timaadaa macmiil fudud oo si sahlan loo fahmi karo waxayna ku darsan kartaa macluumaadka ku habboon adiga oo ku jira qaab la aqrisan karo. Soo dejinta. Io waa doorashada koowaad ee shirkado kala duwan, khubaro SEO, barnaamijyada, horumarinta webka, iyo khubarada warbaahinta bulshada. Waxay saadaalisaa dhaqdhaqaaqa macaamiisha waxayna raadineysaa horumarkaaga tartamayaashaada